Dare Roranga Vakavhima Nzou Zvisiri paMutemo
WASHINGTON — Dare ramejestiriti muHwange neChitatu rakapa mitongo yakaomarara kuvanhu vatatu vakabatwa vaine mhosva yekushandisa muchetura wecynide kuHwange National Park kuuraya nzou dzinodarika makumi masere.
Muchetura uyu waiiswa mumatsime anonwa nzou mvura. Dzimwe mhuka dzakaita seshumba dzinonzi dzakafawo muchiitiko ichi.
Mutongi Rosemary Dube vekuHwange Provincial Magistrate Court vakatongera Robert Maposa uyo ane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemishanu nenyaya yekuwanikwa nenyanga dzenzou.
Mumwe akabatwa nemhosva ndiThabani Zondo akatongerwawo kugara mujeri kwemakore gumi nemashanu.
Dedani Tshuma uyo ane makore makumi maviri nemashanu akakandwa mujeri kwemakore gumi nematanhatu nekuwankiwa nenyanga dzenzou uya akanzi abhadhare mari inosvika mazana maviri ezviuru zvemadhora musi wa 15 Zvita.
Mutauriri weZimbabwe National Parks and Wildlife muzvare Caroline Washaya-Moyo vanoti vamwe vashanu vakabatwa nemapurisa vari kutarisirwa kumira pamberi pedare musi wa4 Gumiguru.
Muzvare Washaya-Moyo vanoti vafara zvikuru nmitengo yapihwa vakapara mhosva ava nekuti ichapa kuti vari kuronga kuvhima zvisiri pamutemo vafunge kaviri.
Hurukuro naMuzvare Caroline Washaya-Moyo